Wuxuu Itoobiya u xirnaa 11 sano, haddase waa xor - BBC News Somali
Wuxuu Itoobiya u xirnaa 11 sano, haddase waa xor
Bashiir Makhtal Daahir
Bashiir Makhtal Daahir oo ah muwaadin Soomaali ah oo haysta dhalashada dalka Canadi, isla markaana loo heystay in uu ka tirsanaa Ururka ONLF oo xabsi daa'in ku xukunnaa ayaa xabsi ku yaalla Itoobiya laga sii daayey bisha April.
Waxaana lagu wareejiyey saafaradda Canada ay ku dalka Itoobiya si dib loogu celiyo dalkiisa Canada.
Makhtal wuxuu marweliba uu sheegi jiray inuu nadiif yahay oo uusan gelin wax dabi ah.
11 sana marka uu ku jiray xabsi ku yaalla itoobiya ayaa la sii daayey wuxuuna ku noqday dalka uu dhalashadiisa haysto.
Dawladda Itoobiya ayaa xabsiga kasii daysay Bashiir Axmed Makhtal oo dalkaasi ku xirnaa tan iyo sannadkii 2006 loona haystay eedo ah inuu ka tirsan yahay ururka ka soo horjeeda Itoobiya ee ONLF.
Bashiir Makhtal waxay maxkamadda Itoobiya ku xukuntay xabsi daa'im iyadoo ku eedaysay falal argagixiso ah.
Goormee iyo halkee lagu xiray Bashiir?
Bashiir ayaa lagu xiray dalka Kenya sanadkii 2007-dii waxana lagu wareejiyay dowladda Itoobiya,halkaas oo 11 sano ku jiray xabsi kuyaala dalkaas.
Bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Canada ayaa si weyn u soo dhoweeyay sii deynta Bashiir Makhtal oo ay sheegeen inuu muddo dheer si sharci darro ah ugu xirnaa dalka Itoobiya.
Haddaba baarlamaanka Canada ayaa Bashiir Axmed Makhtal ku casuumay in uu khudbad uu kaga warramaya waayihi xabsiga iyo tacaddiyadi loo geystay ugu soo jeediyo mudanayaasha golaha.
Khudbadda Makhtal ee baarlamaanka Canada
Talaadadi ayuu baarlamaanka Canada khudbad uu u soo jeediyey Bashiir wuxuuna kaga hadlay 11 qodob.
Wuxuu yiri "waxaan idin hortaaganahay aniga oo xor ah, mudda dheer oo aan qarow kula jiray xabsiga Itoobiya waxaanna mudda 11 sana ah kala maqneen xaaskeyga iyo qoyskeyga oo dhan".
Waxaan doonayaa inaan dadka reer Canada la wadaago xaaladda xuquuqda aadanaha aadka u cabsida badan ee ka jirta Itoobiya.
Cadaadiska iyo xadgudubyada Itoobiya la iigu geystay igama badbaadin baasboorka muwaaddinimada Canada ee aan sitay.
Waxaanna codsanayaa ayuu yiri inaad gacan ka geysataan sidii loo sii deyn lahaa adeerkeey oo isna mudda 11 sana ah xabsiga ku xiran oo la qabtay isaga oo 16 jir ah.
Dowladaha Itoobiya iyo Kenyana oo dhibka ugu dhacay door ku lahaa aan ugu baaqayaa iney magdhaw iyo raalli gelinba iga siiyaan, dowladda Canada waxaan ka codsanayaa iney igu garab istaagto.
Waxaan sida oo kale fursadda uga faa'ideysanayaa oo aan doonayaa inaan sheego ayuu yiri iney khalad ahayd sida ay masuuliyiinta Canada ay u maareeyeen arrinteyda muddada 11 sana ah taagneyd, waxaanna ka codsanayaa iney baaritaan madax bannaan ay ku sameeyaan arrinta.
"Shacabkeeyga Ogaden oo qowmiyadda Soomaalida ah oo deggan Itoobiya in ka badan 100 sano waxay ku jiraan cadaadis, laga billaabo markii uu guumeystaha Ingiriiska uu gobolka gacanta u geliyey nacabka Itoobiya oo dadkayaga burbur iyo cabburin ku hayso" ayuu yiri Bashiir.
"Awoowgey Makhtal Daahir wuxuu ahaa geesi hoggaaminayey xuquuqda iyo ilaalinta shacabka Ogaden iyo Soomaalida inteeda kalaba".
"Wuxuuna awoowgeey dhintay 2000, iyada oo ay da'diisu kor u dhaaftay 100 jir, bulshada Ogaden iyo Soomaalida kalaba ay si weyn u qaddariso".
Bashiir ayaa sidoo kale ka sheekeeyay sidii uu uga tagay Itoobiya isaga oo yar "Waxaan ku dhashay Itoobiya balse waxaan dalka Soomaaliya aaday aniga oo toddoba jir ah si aan waxbarasha u raadsado. Waxaan waxbarashadeyda dhammeeyey 1989, xilligaasi oo xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ay ahayd mid aad u adag weyna adkeyd inaan Itoobiya ku noqdo" ayuu yiri.
"Waxaan u socdaalay Talyaaniga walaalkey iga weyn oo Canada jooga i dammaanad qaaday waxaanna Canada imid 1991 waxaanna dhalashada Canada qaatay 1994, waxaanna bartay maaddada koombiyuutarka (Computer Science) waxaanna ku shaqeynayey xirfadda farsamayaqaan dhinaca koombiyuutarrada ah".
Waxa kale oo uu ka waramay qaabkii uu u safray ka hor intii aanan la qabanin "Kaddib si aan dhaqaalaheyga kor ugu soo qaado waxaa shirkad la noqday rag aan saaxibba nahay oo dharka ka ganacsado oo ku sugnaa Jabuuti 2001, mudda 5 sana ahan waxaan ku sugnaa dalka yar ee Jabuuti. Waxaanna u kala safri jiray jabuuti, Dubai, Kenya iyo Canada. 2006-di xilliga xaaladda Soomaaliya ay adkeyd aadna u khatar badneyd oo aan howla ganacsi u joogay. Waa xilli Itoobiya iyo Soomaaliya uu dagaal ka dhaxeeyey oo ciidamada Itoobiya gudaha u galeen Soomaaliya" ayuu yiri Bashiir.
Goormaa la xidhay Bashiir Makhtat Daahir?
December 31-keeda iyada oo loo dabbaal dagayo sanadka cusub ee 2006 ayay askar Kenyan ah igu xidheen xudduudda Soomaaliya iyo Kenya ay wadagaan mana fileyn iney xaaladdu sidaa khatar u tahay.
Maalmo ayaa xabsi la igu hayey oo su'aala la iga weydiinayey xaaladda Soomaaliya, waxaana la ii sii gudbiyey magaalada Nairobi.
Taariikhdu markay ahayd 6-da bisha January, 2007, waxaa ii yimid laba nin oo sirdoonka Itoobiya ka tirsan si ay su'aalo ii weydiiyaan iyaga oo ay wehliyaan xubno Kenyaan ah.
Aad baan u yaabay waxayna igu noqotay dhakafaal aadna waan u walwalay.Taasoon u arkay calaamad khatar ah. Anigu laga billaabo marki aan anoo toddoba jir ah waddanka ka tagay dib uguma noqon Itoobiya anoon weliba Itoobiyaanku kalsooni ku qabin.
Saraakiisha Canada ee Kenya ku sugan waxaan u sheegay iney seddex ilaa afar jeer ay ii yimaaddeen raga sirdoonka Itoobiyaanka ah, waxay laba jeer ay warqad ay ku wargelinayaan wasaaradda arrimaha dibedda kenya u qoreen.
Waxaan qabsaday qareen Kenyaan ah si uu iigu dooday laakiin maalin Isniin oo ay taariikhdu tahay bisha January 20-keeda ayaa la I geeyey Gigada diyaradaha ee Nairobi si dalka la iiga saaro, aniga oo airboorka ku sugan ayaan damcay inaan hoos ahaan ula xidhiidho xaaskeyga aan 9 bilood ka hor isguursannay nasiib darro iima suuragelin.
Ciidamo badan oo Kenyaan ah ayaa halkaasi ku sugnaa, waxaan diiday inaan diyaaradda raaco oo dhulka ayaan jiifsaday balse ciidammada Kenya ayaa si aad ah ii garaacay ilaa iyo hadda nabarrida maalintaa igu dhacay xanuunkoodu waan dareemaa.
Waxaanna diyaaradda aan ku saarneyn 34 qof , 3 maalmood waxaa nalagu hayey Muqdisho kaddib waxaa naloo sii gudbiyey aniga 16 ka mid ah dadkii aan wada soconnay magaalada Addis Ababa January 22, waxaana nalagu sii qaaday diyaarad ciidan.
Waxaana nala geeyey xabsiga Ma'ikalaawi oo ah xabsiga sirdoonka ay dadku ku ciqaabaan waxaana la igu xidhay dhulka hoostiisa xabsi ku yaallo oo dhinac walba laba miitir ah, aad u qaboow oo hoostana biya ku leh.
Sanadkii ugu horreeyey oo dhan si joogta ah ayaa la ii ciqaabayey waxayna igu dirqinayeen intaas inaan jaajuusnima uga shaqeeyo dadka Ogaden.
Xaaladda aan xambsiga kala kulmay ayaa waxay noqotay mid caafimaadkeyga uu ku baaba'ay, habeen walba xabsiga waa la iigala bixi jiray, habeen walbaba waxaan maqli jiray qaylada iyo oohinta macabiista kale ee jirdilka lagu sameeynaya.
Bartimihi 2007, waxay xidheen walaalkeey iyo wiilkiisa, walaasheey iyo wiilkeeda iyo qaar kale oo qoyskayaga ka tirsan, iyada oo walaalkeey Xasan la soo daayey 2009 maadaamaa uu caafimaadkiisa aad u liitay wuxuuna geeriyooday maalma kaddib markii xabsiga laga sii daayey.
Maxkamadda sare ee bashiir ku xukuntay xabsi daa'im
Maxkamad noocee ayaa la saaray Bashiir Makhtal?
-Inta u dhaxeysay February 2007 - August 2008 waxaa la i saaray maxkamad militari si loogu go'aamiyo in dacwaddeeyda maxkamad miltari lagu qaadayo iyo inkale.
-Bisha Oktoobarr 2008 ayaa la go'aamiyey in dacwadeeyda ay qaaddo makamad caadi ah.
-Bisha Janaayo 2009, waxaa la ii gudbiyey xabsiga dhexe ee Qaaliti waxaanna ku xidhnaa sagaal sano.
-Dacwaddeeyduna waxaa la eegayey inta u dhaxeysay Janaayo ilaa iyo Agoosto 2009 waxayna dowladda itoobiya ay iga mamnuucday wax walba oo iga caawin lahaa inaandacwadda iska difaaco.
-Waxaan maxkamadda horgeeyey in kabadan 60 caddeymo oo aan isku difaacayo oo markhaati ii noqonaya lab aka mid ah seddexda garsoore kiiskeyga wey u dabacsanaayeen.
-Maxkamadda sare ee Itoobiya ayaa go'aan soo saartay kaasi oo ay ku sheegeyso inaan dambiile ahay waxayna damceen inay xukun dil ah igu xukumaan balse aadaamaa aan dambi hore laheen ay xabsi daa'im iigu beddeleen.
-Bisha Diseembar 2009, ayaan racfaan ka qaatay xukunka balse garsooraha ayaa hor istaagay inuu xitaa racfaankeyga dib u eego, 20 daqiiqo oo dhageysi ah kaddib waxuuba qaaddacay racfaanka aan qaatay.
-Marar badan ayay codsigayga ah inaan la shaqeeyo ii soo dhigeen laakiin waan ka diiday, 2013 waxaa dib la iigu celiyey qol cidla ah oo aan keligey ku xidhnaan jiray.
Sidee lagu sii daayey Bashiir?
Ugu dambeynti, horraanti sanadkan kacdoonnadii xoogganaa ee dalka Itoobiya ka billaawday, waxaan aaminsanaa iney noqon karto fursadda keli ah ee aan xabsi uga soo bixi karo.
Siyaasiyiin badan ayaa la sii daayey bilooyin ayaan iska joogay anoon helin wax war oo cusub oo aniga i quseeya.
Bashiir makhtal oo Toronto lagu soo dhaweynayo
Subax ay taariikhdu tahay April 18, taliyaha xabsiga ayaa wuxuu dhagaheyga ku soo riday in maanta la i sii deynayo, runtii ma aaminsaneen in la I sii deynayo ilaa ay si dhab sii deynteyda u dhacday.
48 saac kaddib markii la i sii daayey waxaan dib ugu soo laabtay waddankeyga Canada.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa masuuliyiinta Canada dadaalki dheeraa ay arrinteyda u galeen oo aan aaminsanahay iney suurageli laheen dadaalkooda la'aantii iyo dadaalki dibloomaasiyadeed oo ay saareen xilligi uu ra'isal wasaarihi hore ee Itoobiya Meles Zeenaawii uu booqashada ku imid Toronto si uu uga qayb galo shirka G20.
Waxaan sidaa oo kale soo dhaweynayaa safarradii ay aniga darteey ugu tageen Itoobiya Xoghayaha baarlamaanka Obhrai iyo wasiirka gaadiidka John Baird xilligi dowladdi Stephen Harper.
Xabsigana waxaa igu soo booqday xoghayaha baarlamaanka Omar Alghabra sanadkii hore, shantii sano ee ugu dambeysay dadaalka dowladda Canada wuxuu ahaa sidii la ii so odeyn lahaa.
18-ka April markii xabsiga la iga soo daayey aniga qalbiga ka murugeysan ayaan kaga soo tagay xabsiga aderkeey Maxammed Xasan Axmed, 16 jir isaga oo ah la xidhay 11 sana xabsi ku jira.
Waxaan sida oo kale aad uga walwalsanahay maxaabiis aan isla xirneen oo isugu jira suxufiyiin, dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha, mas'uuliyiin dowladeed iyo qaar xisbiyada mucaaradka adduunkana xaaladda xuquuda adanaha Itoobiya wax la taaban karo kama qaban.
Ammaan gaar ah ayaan u hayaa dadka kaalinta ku lahaa iney xorriyaddeyda dib iigu soo noqoto, waxaana dadkaasi ugu horreeyo xaaskeyga Azizo, jaaliyadda Soomaalida ee Canada iyo kuwa waddamada kale ku nool.
Muxuu baarlamaanka Canada ka codsaday ama uu la wadaagay?:
Iney dowladda Canada cadaadis ku saarto dowladda Itoobiya sidi ay adeerkeey Maxammed Xasan Axmed u sii deyn lahayd.
Iney beesha caalamka ay si weyn u garab istaagaan shacabka ogaadeen si ay xuquuqdooda oo dhammeystiran ay itoobiya uga helaan, Itoobiyana ay u ilaalin lahayd xuquuqda shacabka reer Itoobiya dhammaantood iyaga aan qowmiyad u kala saarin.
Itoobiya iyo Kenya ayaa mas'uul ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee la ii geystay waxaanna labada dalba ka rabaa magdhow iyo raalli gelinba dowladda Canadana dalbakaasi ay igu garab istaagto.
Maadaamaa aan dadaalka arrintani ay u geli lahayd aan dhaliilsanahay waxaan codsanayaa in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dibloomaasiyiinti iyo siyaasiyiinta arrinteyda ka gaabiyey si ay cashar ugu noqoto si ay mustaqbalka muwaaddiniinta Canada ee ila midka ah ay u difaacaan.
Waxaanna mahad balaadhan aan u soo jeedinayaa dhammaan dadki ka qayb qaatay sii deynteyda ee dal iyo dibadba jooga, iyaga oo farriimo i soo gaarsiiyey, saxiixooda igu garab istaagay, dibad baxyana darteey u sameeyey.
Waxaan leeyahay dadaalkiinna sii wada oo xuquuqda aadanaha difaaca taasoo raja u noqoneysa macabiis badan si ay xorriyaddooda dib ugu helaan.
Atoorihii 'is dilay' filimkiisii ugu dambeeyay oo soo baxaya
Dowladda ay Somaliland xiriirka la yeelatay yaa aqoonsan, muxuuse yahay?